Online Burma Library > Main Library > Drugs > Drugs: regional and global
Home > Main Library > Drugs > Drugs: regional and global
Drugs: regional and global
Description/subject: Useful site with some full articles (most in French) on the global drug economy, including sections on Burma. Links. Site utile qui contient bien de documents (la plupart en francais) sur l'economie mondiale des drogues, y incluse la birmanie.
Language: Francais, French (some English)
Title: China's drug habit fuels return of the Golden Triangle
Description/subject: "By the end of this year Myanmar should have been free of narcotics. Instead, production of opium is soaring and the East Asian country, once part of the fabled Golden Triangle, is the second largest producer in the world. Axel Kronholm investigates why..."
Author/creator: Axel Kronholm
Description/subject: စကားချီး။ ။ ဤပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသည် TNI ၏ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ် ဝေခဲ့သည့် ‘ရွှေတြိဂံနယ်မြေမှ ဆေးပြတ်စဝေဒနာများ၊ ဖရိုဖရဲဖြစ်နေ သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးဈေးကွက်’ (Withdrawal Symptoms in the Golden Triangle: A Drugs Market in Disarray) ဟူသည့် အစီရင်ခံစာ၏ နောက် ဆကတ် အွဲ ကျိုးဆက်တစခ်ြုဖစသ် ည။် ဤအစရီ ငခ် စာံသည်အရှေ့တောင် အာရှမူးယစ်ဆေးဝါးဈေးကွက်၏ ပြောင်းလဲမှုကို လေ့လာသုံးသပ်၍ အစား ထိုးအပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်နိုင်မည့် ရွေးချယ်စရာမူဝါဒများကို ရေးဆွဲဖော် ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် ကနဦးအားထုတ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံ စာ၌အရှေ့ တောင်အာရှေ ဒသတစလ်ွှားမှဘနိ်းအဓကိ စကို ပ်ျိုးထတု လ် ပ်ုလျက်ရှိသည့် ရြွှေတဂိ ဟုံလူသိများသည့် မြန်မာ၊ လာအိုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ တို့၌ ၁၉၉၈ မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အတွင်း ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု သိသိ သာသာလျော့ကျသွားစေခဲ့သည့် အဓိကမောင်းနှင်အားများနှင့် နောက် ဆက်တွဲသက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်များဖြစ်သည့် အရှေ့မြောက်အိန္ဒိယနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယူနန်ပြည်နယ်များရှိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ နှင့်လည်း ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အစီရင်ခံစာအတွင်း မြန်မာနှင့် လာအို နိုင်ငံရှိ ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး အခြားဒေသများသ့ို ရွေှ့ ပြောင်း ပျံ့ နှံ့သွားခသဲ့ ည့် ဘနိ်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းများကို မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ ‘ဆေးပြတ်စဝေဒနာများ’ (Withdrawal Symptoms) ကို ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့ချိန်မှစ၍ အရှေ့တောင်အာရှ မူးယစ်ဆေးဝါးဈေးကွက်အတွင်း သိသိသာသာ ပြောင်းလဲမှုများကို တွေ့ရှိလာရသည်။ သိသာထင်ရှားမှု အရှိဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ တစ်ကျော့ပြန် ဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏထက် နှစ်ဆကျော် မြင့်မားလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့မြှင့်တက်လာခြင်းကြောင့် လက်ရှိတည်ဆဲ မူးယစ် ဆေးဝါးတားဆီးနှိမ်နှင်းရေး မူဝါဒများ၏ ထိရောက်အကျိုးရှိမှုနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ၂၀၁၅ မူးယစ်ကင်းစင်ရေးဒေသတွင်း ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြီးကို လက်လှမ်းမီနိုင်ခြင်းရှိမရှိ မေးခွန်းထုတ် စရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခြုံငသုံုးံသပရ် မညဆ် ပိုါက ဒေသတငွ်း ရှိ မူးယစ် ဆေးဝါးဆုင်ိရာ ပြဿနာရပမ်ျားအပေါ် ကငို တ် ယွ သ် ည့် မ၀ူါဒများသည် တားဆီးချုပ်ချယ်မှု တင်းကျပ်လွန်းအားကြီးသည်။ ယင်းမူဝါဒများသည် မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲလျက်ရှိသည့် လူအုပ်စုများအတွက် ဆိုးရွားပြင်းထန်သည့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ သာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အပယ်ခံ လူ့အသိုက်အ၀န်းများနှင့် အဆင်းရဲဆုံး ရပ်ရွာလူထုများအများဆုံး ထိခိုက်ခံစားကြရသည်။ ‘တစ်ကျော့ပြန်’ အစီရင်ခံစာသည် ဒေသတွင်းရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများ၏ အကြောင်းတရား များနှင့် သက်ရောက်ထိခိုက်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ခြငွ်း ချကမ် ရှိ တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ရက်အကန့်အသတ်အပေါ်အခြေ ခံ၍ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြဿနာ ရပ်များကို ပိုမိုကြီးထွားလာစေကြောင်း ဝေဖန်သုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အစီရင်ခံစာ၌အဆိုပြုထားသည့် ရွေးချယ်စရာမူဝါဒများသည် နိုင်ငံတကာ အလေ့အထကောင်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးစံ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည့် အပြင်ကရုဏာတရားနှင့် အထောက်အထားအပေါ် အခြေပြု၍ ယုတ္တိကျကျဖြင့် ထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော် နိုင်သည့် မူဝါဒများလည်းဖြစ်သည်။
Description/subject: "TNI's in depth examination of the illegal drug market in the Golden Triangle, which hasawitnessedadoubling of opium production, growing prison populations and repression of small-scale farmers. This report details the failure of ASEAN's 'drug free' strategy and the need foranew approach..."The illicit drug market in the Golden Triangle – Burma, Thailand and Laos – and in neighbouring India and China has undergone profound changes. This report documents those changes in great detail, based on information gathered on the ground in difficult circumstances byagroup of dedicated local researchers. Afteradecade of decline, opium cultivation has doubled again and there has also beenarise in the production and consumption of ATS – especially methamphetamines. Drug control agencies are under constant pressure to apply policies based on the unachievable goal to make the region drug free by 2015. This report argues for drug policy changes towardsafocus on health, development, peace building and human rights. Reforms to decriminalise the most vulnerable people involved could make the region’s drug policies far more sustainable and cost-effective. Such measures should include abandoning disproportionate criminal sanctions, rescheduling mild substances, prioritising access to essential medicines, shifting resources from law enforcement to social services, alternative development and harm reduction, and providing evidence-based voluntary treatment services for those who need them. The aspiration ofadrug free ASEAN in 2015 is not realistic and the policy goals and resources should be redirected towardsaharm reduction strategy for managing – instead of eliminating – the illicit drug market in the least harmful way. In view of all the evidence this report presents about the bouncing back of the opium economy and the expanding ATS market, plus all the negative consequences of the repressive drug control approaches applied so far, making any other choice would be irresponsible."
Title: Myanmar drugs fuel Thai gangs
Description/subject: CHIANG MAI, Thailand - She's affectionately known as Yai Elle or Yai Aew - or Grandmother Aew - among this city's rough and tumble, narcotics-peddling youth gangs. For more thanadecade, Laddawan Chaininpun, 62, has worked to help rehabilitate Chiang Mai's gangs and in the process has won many of their trust. She got involved with the gangs initially because her nephew had joined one of Chiang Mai's most vicious gangs: the Samurais. They earned that nickname because they were often seen wielding long swords while riding motorcycles at high speed through the city at night.
Title: GLOBALIZATION AND NON-TRADITIONAL SECURITY ISSUES: A STUDY OF HUMAN AND DRUG TRAFFICKING IN EAST ASIA
Description/subject: ABSTRACT: East Asia facesaseries of non-traditional security challenges that include environmental concerns, infectious diseases and transnational crime. Rather than creating such forms of insecurity, the process of globalization has significantly amplified their spread and impact and accelerated their significance. This paper focuses on illicit drug and human trafficking in China and the Southeast Asian countries and examines these categories of transnational crime in the context ofaglobalizing world. It argues that the protection of state and human security against drug and people trafficking will increasingly require effective transnational cooperation and some surrendering of state sovereignty. The paper reflects on the depth of such problems in East Asia by analyzing the production, distribution and consumption of narcotics as well as the trafficking of women in the region. It notes an increasing level of multilateral cooperation in East Asia to combat human and drug trafficking. Yet, in addition to the ongoing development of capacity-building and soft mechanisms of cooperation, deeper law enforcement and judiciary collaboration is required atamultilateral level to address these non-traditional security challenges.
Author/creator: Ralf Emmers
Source/publisher: Institute of Defence and Strategic Studies Singapore (RSIS Working Paper No. 62)
Format/size: pdf (525K - 34 pages)
Title: Afghanistan, Annual Opium Poppy Survey, 2001
Date of publication: 17 October 2001
Description/subject: "UNDCP survey shows sharp reduction in opium cultivation in Afghanistan in 2001...the results show thatatotal of 185 metric tons of raw opium were produced in the current year, 94 per cent less than the output in 2000 of 3,276 tonnes and 96 per cent less than the bumper harvest of 4,581 tonnes reported by the 1999 survey...the reductions are clearly the result of the im,plementation of the opium poppy ban..."
Format/size: pdf (818.63 MB)
Alternate URLs: http://www.unodc.org/unodc/search.html?q=Afghanistan%2C+Annual+Opium+Poppy+Survey%2C+2001
Title: Afghanistan country brief: Drug Situation Report September 2001
Description/subject: "...Opium: According to the official U.S. Government estimate for 2001, Afghanistan produced an estimated 74 metric tons of opium from 1,685 hectares of land under opium poppy cultivation. This isasignificant decrease from the 3,656 metric tons of opium produced from 64,510 hectares of land under opium poppy cultivation in 2000. The United Nations Drug Control Program (UNDCP) also estimates opium production in Afghanistan. The UNDCP estimatedareduction in 2000 opium production from 1999, pointing toa10 percent reduction in land under opium poppy cultivation and the impact ofaprotracted drought in the area as the causes for the smaller opium production. Estimates for 2001 have not been released..."
Source/publisher: U.S. Drug Enforcement Administration (DEA)
Alternate URLs: http://ns1.afgha.com/alamut/Biblio/dea/Afghanistan%20Country%20Brief.htm